Raha ny fifanarahana mpitazona dia zavatra irina ho an'ny mpiasa tsy miankina, mariho fa tsy miasa ho an'ny mpiasa tsy miankina irery izany fa ho an'ny orinasam-pandraharahana rehetra mitady hampiorina ny fidiram-bolany. Ity dia nilaza fa zava-dehibe ny mahatakatra ny atao hoe fifanarahana mpihazona sy ny fomba hampiasanao azy hisy fiatraikany lehibe amin'ny orinasanao. Ao amin'ny Amal Khamis Advocates sy Legal consultants dia manolotra serivisy Retainer ho an'ny orinasa sy orinasa any UAE izahay.
Ny drafitra retainer dia lakilen'ny fahombiazana maharitra sy ny faharetan'ny orinasa rehetra. Ny fifanarahan'ny retainer dia ireo fifanarahana izay mamaritra amin'ny fomba ôfisialy ny toetran'ny fifandraisanao amin'ny mpisolovava anao. Ity dia fomba azo antoka kokoa sy tsy dia lafo loatra idirana amin'ny serivisy ara-dalàna sy drafitra ho avy.
Any amin'ny biraon'ny Amal Khamis Mpisolovava sy mpanolo-tsaina ara-dalàna, manolotra serivisy isan-karazany izahay, ao anatin'izany ny fandrafetana ireo fifanarahana momba ny fitazonana ho anao. Satria mikorontana tsy tapaka ny tontolon'ny asa noho ny fanavaozana miseho isan'andro, dia ilaina ny fananana fifanarahana fitazonana hita taratra ny fahamoran'ny fotoana. Hahazo izany rehetra izany ianao ary bebe kokoa rehefa manakarama anay ho mpisolovava anao. Manantona anay anio, ary andao hanomboka.